Google Glass တွင် မျက်တောင်ခတ်ရုံနှင့် ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်မည့် feature ပါဝင်မည် ~ Saw Chit Diary
No comments | Sunday, May 12, 2013
Google Glass တွင် မျက်တောင်ခတ်ရုံနှင့် ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်မည့် feature ပါဝင်မည်
Google Glass တွင်ပါဝင်သည့် Android source code အရ ၎င်းမျက်မှန်ကို ၀တ်ဆင်အသုံးပြုသူများသည် မျက်တောင်ခတ်ရုံနှင့် ဓာတ်ပုံများကို ရိုက်ကူးပေးနိုင်မည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါ code သစ်ကို Google Glass developer ဖြစ်သူ Mike DiGiovanni ကရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ Winky ဟုခေါ်သည့် feature သစ်သည် Screen ကို ပိတ်ထားသည့်အခါတွင်လည်း မျက်တောင်ခတ်ရုံဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူး ပေးနိုင်သည့်အတွက် ဓာတ်ပုံရိုက်ရာတွင် ခလုတ်ကိုနှိပ်ကာရိုက်ခြင်း၊ အသံဖြင့် အမိန့်ပေးရိုက်ကူးခြင်းတို့ဖြင့် ပြုလုပ်စရာမလိုတော့ပေ။ DiGionvanni သည် Winky ကို Android source code အနေဖြင့် https://github.com/kaze0/winky မှဖြန့်ချိပေးခဲ့ပြီး ၎င်းကို
compile လုပ်ကာ APK (application package file) တစ်ခုအနေဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဟု ၎င်း၏ Google+post တွင် ဖော်ပြထားသည်။
မိမိတို့ ကွန်ပြူတာမှာ USB အသုံးပြုခွင့်ကို ပိတ်ထား...
Sex ၏ အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ အစွမ်းများ
ကင်ဆာရောဂါကိုတွန်းလှန် ကာကွယ်နိုင်သောအစားအစာ (၁၃) ...
သားဖွား ဝေဒနာကို အမျိုးသားများ ကြုံတွေ့ ခံစားနိုင်...
Viber ကို PC ပေါ်မှာ Video Call ပါ သုံးနိုင်ပြီး.
အသံထက် ငါးဆပိုမြန်သော စစ်သုံးလေယာဉ် အမေရိကန် စမ်းသ...
Google Glass တွင် မျက်တောင်ခတ်ရုံနှင့် ဓာတ်ပုံရိုက...
Padamyar FM for Android Apps